China auto izahlulo zepetroli lokucoca ulwelo 030 115 561AB mveliso kunye nabenzi | Chuangqi
I-100% entsha yokuCoca ioyile kunye noMgangatho oPhakamileyo
Inombolo yoMvelisi: OC515,030 115 561 AB, 030 115 561 AN
Imodeli yeMoto eyiFit: VW Golf R32 GTI Rabbit 10-13 1.4L CGGA OC515,030 115 561 AB, 030 115 561 AN
Ukuba ufuna amanye amalungu ezithuthi, nceda unxibelelane nathi. Abathengi abathengisa kakhulu bafumana amaxabiso afanelekileyo.
Inombolo yomzekelo 030 115 561AB Ukusetyenziswa 1
Ubungakanani ubungakanani obuqhelekileyo Isiqinisekiso I-ISO 9001: 2015 / TS 16949
Izinto eziphathekayo Umnyama PP kunye nomhlophe
Igama lomxholo Isihluzi somoya Ukumelana nokungenisa 1.2 IKPA
Ukusebenza kokucoca Iipesenti ezingama-98 MOQ 520 Isiqwenga
Ukusebenza ubomi 10000 km Ixabiso USD 1-5
Ukusetyenziswa Susa ukungcola kothuli Izibuko Tianjin / Guangzhou
1.Ukuxhasa iYurophu, iRussia, uMbindi Mpuma, iBrazil, iAfrika, iJiphutha, iIndiya, uMzantsi mpuma weAsia, iMalaysia, iIndonesia, iPhilippines, njl.
2.Material: Good umgangatho PP emnyama kunye ezimhlophe non-ephothiweyo.
Icebo lokucoca ulwelo 3.Professional / isihluzi sekhabhathi / icebo lokucoca ioyile kunye nomcwangcisi wecandelo lokucoca ulwelo ukusukela ngo1999.
4.We yamkela iodolo yakho eyenziwe ngokwezifiso, sinokuhambisa iimpahla ngexesha.
Iifilitha zeoyile eziyinyani zeVolkswagen ziqulathe ukucoca ngakumbi phakathi kunezihluzo zasemva kophawu (ngamanye amaxesha ziphindwe kabini), kuqinisekisa ukuhamba kweoyile ngokufanelekileyo ngesihluzi, ngelixa ubambisa amasuntswana onakalisayo. Ukucocwa okufanelekileyo kubalulekile ekuthinteleni ukunxiba okugqithisileyo kunye nokonakala kwenjini yakho, ukuyigcina ikwimeko ephezulu yokusebenza iminyaka ezayo. Ngaba izihluzi zesitayile zinokuhamba ngokudlula kunye ne-anti-drain back valves eqinisekisa ukubonelelwa okwaneleyo kweoyile kwizinto zangaphakathi ze-injini ngexesha lokuqala kobandayo kunye nokukhawulezisa okunzima.
I-OEM yokwenyani-Ilunge ngokugqibeleleyo
Ukubonelela ngokusebenza kweinjini esemgangathweni
Ukucoca ioyile esemgangathweni ophezulu ukucoca ioyile ngokufanelekileyo, ukubamba amasuntswana onakalisayo ngaphambi kokuba afike kuwe ngelixa ugcina inqanaba lokuhamba okuphezulu
Ngokucacileyo ngaphezulu kokucoca phakathi kunokhuphiswano lwasemva kweempawu zentengiso, ngamanye amaxesha kabini!
Yintoni ekufuneka uyazi ngokutshintsha isihluzo sakho sefutha
Ukuze wenze umsebenzi wawo ngokufanelekileyo isihluzo sakho samafutha sifuna ukutshintsha rhoqo ukufezekisa umsebenzi waso ekubambeni amasuntswana angafunekiyo kunye namanzi ajikeleza kumafutha akho. Ngenxa yoko, inkqubo yenaliti kunye nemilomo yemilomo iya kufumana ukonakala okungafanelekanga, kwaye ukusebenza kwesithuthi sakho okanye komatshini kuya kusokola.
Ukuba awuqinisekanga malunga neempawu ezinokubakho zeempawu zokucoca amafutha, nantsi eminye imiqondiso lixesha lokuba ufumane isihluzi sefutha:
Gqibezela ukusilela ukuqala
Ukukhawulezisa kakubi okanye ukuncipha kwamandla
Ukutshiza okanye ukumisa ngesantya esisezantsi
Ukusebenza kwe-Fuel kubi kakhulu
Ukukhanya kwesilumkiso senkqubo kuza, kubonisa ukuba kukho ingxaki
1. Ukuhanjiswa kwangexesha.
2. MOQ enokuxoxwa
3. Yenza ukupakisha.
Inkqubo yeQ / C ethembekileyo (ISO 9001: 2015 & TS 16949)
5. Ukuqonda kakuhle malunga nendlela yentengiso.
6. Vala ingqalelo kwinkonzo yasemva kokuthengisa
7. Ukuxhaswa ngamandla kwezinto zokusebenza.
8.Siza kukuphendula umbuzo wakho kwisithuba seeyure ezingama-24.
9 Emva kokuthumela, siya kulandelela iimveliso eziza kuwe kanye ngeveki, de ufumane iimveliso. Xa unempahla, zivavanye, kwaye undinike ingxelo.Ukuba unemibuzo malunga nengxaki, nxibelelana nathi, siya kukunika indlela ekuphela kwakho.
Egqithileyo Umatshini wokucoca ulwelo womoya oSebenzayo oPhezulu oPhezulu
Okulandelayo: Icebo lokucoca ulwelo lweoyile yeHONDA ACCORD yeoyile yeefayile ze-OEM 15400-PLC-004 Usebenzisa i-HONDA
Isihluzi seDiesel Fuel 26550005
Icebo lokucoca ulwelo Bmw G650gs
Icebo lokucoca ulwelo Bmw Isithuthuthu
Isihluzi se Fuel Ff1902
Isihluzi seVw Beetle Fuel